Minivan "Renault ग्रैंड दर्शनीय» 2012 - नयाँ के छ?
हालै, रूस दिग्गज वैन को नयाँ पुस्ता बेच्न थाले "Renault ग्रैंड दर्शनीय।" यी सुंदरियों पहिले नै धेरै युरोपेली मोटर चालकहरुलाई हृदय जितेको छु, र अहिले यो सुविधा उपलब्ध छ, र हाम्रो चालक। यो समीक्षा को भाग रूपमा हामी किनभने युरोप मा यसको लोकप्रियता को यो कार नजिक ध्यान समर्पित पनि बिक्री पहिलो महिनामा फीका गर्दैन।
Minivan "Renault": फोटो र डिजाइन को एक समीक्षा
हामी अघिल्लो minivans संग नयाँ उत्पादन तुलना भने, हामी शरीर संरचना र आकार मा धेरै परिवर्तन अब डिजाइनर गरेका छन् भन्न सकिन्छ। अब अद्यावधिक minivan "Renault ग्रैंड दर्शनीय" थप पुष्ट आकृति, तल्लो हावा intakes र नयाँ Bumpers एक सुन्दर आकार भएको दावा। सारा मा, बाहिरी विकासकर्ताहरूले को क्षेत्र मा धेरै परिवर्तन धन्यवाद एकदम को तानेर गुणक कम गर्न व्यवस्थित छ, र यो, बारी मा, मेशिन को इन्धन खपत सकारात्मक प्रभाव छ।
भित्र नयाँ minivan "Renault ग्रैंड दर्शनीय" थप विशाल भयो। दोस्रो र तेस्रो पङ्क्ति सिट को यात्रु लागि अब देश परिवार यात्राको बनाउने, अतिरिक्त स्पेस विनियोजन वा प्रकृति पनि अधिक आरामदायक हुनेछ। यो पनि एउटा नयाँ मनोरम sunroof र फराकिलो ट्रंक, अब पनि एक साइकल समायोजित गर्न सक्छन् जो उपस्थिति टिप्पण लायक छ। इलेक्ट्रनिक नवाचारै बीच एक 5.8 इन्च एलसीडी स्क्रीन मा जानकारी दिन्छ कि नयाँ नेविगेशन प्रणाली को उपस्थिति, साथै निकै पार्किंग र धेरै अन्य ठाउँमा सुविधा जो कार पार्किंग विशेष पछाडिको दृश्य क्यामेरा, अस्तित्व बाहिर खडा। पनि कार गति सीमक र स्वचालित headlamp स्विच सिस्टम एक आगमन कार रोशनी को उपस्थिति द्वारा संचालित छ जो संग सुसज्जित छ।
फ्रान्सेली minivan "रेनो" दुई डिजेल इन्जिन द्वारा staffed। 130 अश्वशक्ति को क्षमता संग मूल 1.6-लीटर एकाइ पुरानो 1.9-लीटर इन्जिन प्रतिस्थापित dci 130. दोस्रो टर्बो इन्जिन नै शक्ति (130 "घोडाहरू") छ, तर काम मात्रा गर्दा अलिकति 2.0 लिटर को स्तरमा वृद्धि। चार-बक्स "मिसिन" वा "संयन्त्र" पाँच कदम - दुवै इन्जिन दुई प्रसारण को एक विकल्प संग जोडीएको छन्। को minivan को इन्धन खपत को मामला मा एकदम आर्थिक छ र धेरै crossovers गर्न नहुनु दिन सक्छन्। 100 किलोमिटर मा, यो (शहर मोड र यो) डिजेल को बस 6.9 लिटर खपत। संग "स्वचालित" को बक्स , यो आंकडा अलिकति वृद्धि - 5-10 प्रतिशतले।
एक नयाँ "रेनो" minivan लागत
आधारभूत संस्करण मा फ्रान्सेली "महान् दर्शनीय" को मूल्य 24 हजार 700 अमेरिकी डलर एक चिन्ह साथ सुरु हुन्छ। वाहन सुसज्जित छ ABS, संग शक्ति Windows, धेरै airbags, ब्रेक शक्ति वितरण, बिजुली गरम ढोका दर्पण, साथै विशेष inflatable पर्दे। सबैभन्दा महंगा उपकरण «Privelege» ग्राहकहरु 30 हजार 700 डलर खर्च हुनेछ।
स्कोडा Octavia COMBI - सबै भन्दा राम्रो छनौट
टायर Hankook शीतकालीन म पाइक रुपैया W419: समीक्षा
आफ्नै हातले इन्टरनेटबाट लैन
Anthurium - प्रेमको फूल
कोलेजन - यो के हो? लक्षण, निदान र रोग को उपचार
मुद्रा corrector: जो एक राम्रो छ? चुम्बकीय मुद्रा corrector: समीक्षा, मूल्यहरू
रूसी लागि अस्ट्रिया मा जब: सुविधाहरू, वर्णन र